Bishnu Sharma: कान्तिपुर पढौं कि नागरिक ?
कान्तिपुर र द काठमाण्डू पोस्टले माओवादीको खोइरो खन्ने अनि नागरिक र रिपब्लिकाले कांग्रेस–एमालेको खोइरो । ग्राहकलाई निरन्तरता दिऊँ कि नदिऊँ दोधारमा छु । ग्राहक बनेबापत मैले पढ्न पाउने सूचनाको अधिकार पाइरहेको छैन जस्तो अनुभूति हुँदैछ ।
ममात्र होइन, यी अखबारले दिने सूचनाले नेपाली समाज विभाजित भएजस्तो लाग्छ । भैंसेपाटीमा मर्निङ वाकमा निस्किने नेपथ्य ब्यान्डका गायक अमृत गुरुङसँग म अक्सर विहान कफी पिउने गर्छु । उनै अमृत पनि हिजोआज अखबारको स्टोरी टेलिङ देखेर वाक्क दिक्क भएका रहेछन् । अमृत प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । हिजोआज निश्पक्ष समाचार पाउनै मुस्किल भैसकेको छ ।
एकाध विश्लेषणबाहेक हिजोपल्ट फेसबुक र ट्वीटरमा पढिसकेको न्यूज भोलिपल्ट पैसा तिरेर अखबारमा पढ्नुपर्छ । सोसल मिडियाले न्यूज रुमलाई कसरी प्रभावित पारिरहेका छन् भन्ने सामान्य कुरो पनि सम्पादक सरहरूले नबुझनुभएको हो कि ? नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक किशोर नेपाल सरले अक्सर मलाई सम्झाउँदै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो –‘पत्रकारभन्दा पाठक चेतनशिल र बलिया छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।’ उहाँले भनेको कुरा यतिबेला खट्किएको छ ।
हिजोआज मलाई दलका समाचारप्रति खास चासो छैन । कुटनीति, विश्व र मनोरञ्जन मेरा रुचिका विषय हुन् । तर, हाम्रा अखबारहरू धेरैले रुचि नराख्ने राजनीति र दलका नेताका बासी अनुहार र भाषण छाप्छन् र पढ्न बाध्य पार्छन् । बेनीमा रहेका मेरा हृदयी मित्र हरिकृष्ण गौतमले त प्रतिज्ञा नै गरेँ –अब दोहोर्‍याएर जिल्लामा आउने नेताको भाषणको रिपोर्टिङ गर्दिँन ।’ उनको यो चासो र चिन्ताप्रति मेरो पनि समर्थन छ । हामीजस्ता ग्राहकले अखबारलाई पाठ सिकाउने कि ?
Posted by Sharma Bishnu at 10:05 PM
Adams Kevin March 28, 2015 at 8:42 AM